OTU ESI EDEPỤTA VKONTAKTE EMOTICONS - VKONTAKTE - 2019
Detuo ma kpoo aja aja VKontakte
Enwere mmemme pụrụ iche iji chịkwaa ọkpụkpụ ngwongwo, chekwaa akwụkwọ akụkọ ma lee akụkọ. Ha bara uru karịsịa maka ụlọ ahịa, ụlọ nkwakọba akụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ yiri nke a. N'isiokwu a, anyị ga-ele ahịa ụlọ ahịa, kwuo banyere uru na ọghọm dị na ntanetị ndị ọzọ.
Nbanye na usoro ihe omume ahụ
Ná mmalite, ịkwesịrị ịhazi Client ụlọ ahịa maka nchịkwa dị mfe. Dị ka a na-ahụ na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, enwere ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ike na ọkwa. Ihe niile a na-ahazi site na njikwa, onye ga-ebu ụzọ banye na dezie ihe niile. Site na ndabara, enweghi okwuntughe, ma i ghaghi itinye ya na ozo.
A na-ekekọrịta ọrụ niile na mpaghara anọ, nke ọ bụla n'ime ha bụ maka ọrụ ụfọdụ. Onye isi nwere ike ịlele ngalaba ọ bụla, na, dịka ọmụmaatụ, onye ego - naanị ntaneti meghere ya. Biko rịba ama na ihe ndị na-adịghị na mbipute a na-ebipụta na-apụta ìhè na agba ntụ ma na-emeghe mgbe ịzụrụ.
Nke mbụ, onye njikwa ahụ ga-agbakwunye ngwaahịa ndị ga-anọ n'ime ụlọ ọrụ ya. A choro nke a iji mee ka ịzụta ahịa, ahịa na mgbagwoju anya n'ọdịnihu dị mfe. Ihe niile dị mfe ebe a - dị nnọọ tinye aha, koodu na mpaghara nke mmụba. Ịgbakwunye nkọwa zuru ezu ga-emepe na njirimara zuru ezu, tinyere ntinye foto maka ihe ọ bụla.
Onye nchịkwa nwere ike ịlele osisi osisi ahụ, nke a kọwara ihe niile n'ụzọ zuru ezu na enwere ike ịhọrọ. A na-egosi aha na listi, na ọnụego na ọnụọgụgụ zuru ezu na-egosipụta n'okpuru. Iji mụtakwuo maka ngwaahịa ahụ, ịkwesịrị iji bọtịnụ òké aka aka pịa ya ugboro abụọ.
Tinye onye otu
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị na-eweta ọrụ ma ọ bụ na-ejere ndị ahịa oge niile aka. Maka mma, ha na-agbakwunye na tebụl dị iche. A na-emejuputa ụdị dị iche iche n'ụkpụrụ nke ngwongwo - dị nnọọ tinye data na mpaghara a chọrọ.
Mgbe ị na-agbakwụnye onye ọrụ na ngwaahịa, ị nwere ike ịga n'ihu ahia mbụ. Mepụta ya ma tinye ozi ndi bu isi nke nwere ike abia na aka. O kwesiri iburu n'uche na aghaghi ighachite ogboogbo tupu oge eruo, ebe obu na edeputara ya site na nchikota agwakota site na menu ndi mmadu.
A na-egosiputa arụ ọrụ, nke a kwụrụ ma zụta ihe na tebụl ma dị maka nlele ma dezie naanị ndị ọrụ ahọpụtara. A na-ahazi ihe niile site na akara, nke na-egosiputa ozi bara uru.
Ugbu a, mgbe ngwaahịa dị, ị nwere ike mepee ọrụ nke ndekọ ego. Ha nwere windo nkewa nke ha nwere ike ịchọta ihe niile dị mkpa. Na ala, e nwere mkpọchi maka ịmebanye iche iche na ego. N'elu, na nchịkwa nchịkwa, enwere ntọala na ọrụ ndị ọzọ.
Ighaghachi ego site n'aka onye zụrụ ya site na windo dị iche. Naanị ị ga-etinye ego zuru ezu, ego na mgbanwe, mgbe nke a gasịrị, a pụrụ ịchọta ego ahụ. Okwesiri iburu n'uche na ndi oru a nile ka echekwaro ha, ma onye nlekota ha nwere ike ihichapu ha.
Ụlọ ahịa ahịa na-enye ihe pụrụ iche - nhazi nke kaadị ego. Ya mere, ọ bara uru na ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere ihe ùgwù ndị ahụ. Site ebe a ị nwere ike ịmepụta kaadị ọhụrụ na egwu.
Dị ka e kwuru na mbụ, e nwere nkewa n'etiti ndị ọrụ, onye ọ bụla n'ime ha ga-enweta ọrụ ndị a kapịrị ọnụ na tebụl n'usoro ihe omume ahụ. Nke a ka onye nchịkwa setịpụrụ na ndepụta a họpụtapụtara, ebe e nwere ụdị ndị dị mkpa iji mejupụta. Tụkwasị na nke ahụ, e mepụtara paswọọdụ na ọ bụ naanị onye ọrụ kwesịrị ịma. A ghaghị ime nke a iji zere nsogbu dị iche iche.
Ego na ngbanwe
Ebe ọ bụ na enwere ike ịnwe ọtụtụ ọrụ, yana ngbanwe, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji gosipụta nke a na usoro ihe omume ahụ, nke mere na ị nwere ike nyochaa ngwongwo ngwongwo mgbe ị na-agbanwe ma ọ bụ n'oge ndenye ọpụpụ. Ozi niile nke onye nlekọta chọrọ dị na windo a.
Ọnụnọ nke asụsụ Russian;
Akwa ọtụtụ tebụl na ọrụ.
A na-ekesa usoro a maka ego.
Nke a bụ ihe niile m ga-achọ ịgwa gị banyere ahịa ahịa. N'ozuzu, nke a bụ usoro dị mma nke na-eduzi ahịa azụ ahịa na nchikota ngwongwo nke ngwongwo, nke ga-aba uru maka ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ ebe ọ dị mkpa iji mepụta akwụkwọ ọnụ ma dezie ọrụ ego na ego.
Download mbipụta nke Ụlọ ahịa ahịa
Ezi ụlọ ahịa Client DLL-files.com Esi edozi njehie na window.dll na-efu Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na achọtaghị onye ahịa Steam
Ụlọ ahịa ahịa bụ ezigbo usoro maka ịzụ ahịa. Ọrụ ya ga-ezuru ọtụtụ ndị ọrụ ịrụ ọrụ dị mma, ọbụnadị onye na-enweghị uche ga-enweta ya ngwa ngwa.
System: Windows 7, 10, XP, Vista
Onye Mmepụta: Gorchakov Ivan Mikhailovich
Ọnụ: $ 30
https://termotools.com ig.termotools.com © Vkontakte 2019